Hebrio 10 - Ny Baiboly
Hebrio toko 10
Tsy nahala fahotana ireny sorona fahiny ireny - Ny soron'ny Kristy dia indray mandeha monja - Famporisihana haharitra - Mafy no hanjò izay hivadika - Aoka tsy hadinoina ny faharetana voalohany.
1Ny Lalàna moa dia tsy misy afa-tsy aloky ny soa ho avy, fa tsy ny tena endri-javatra, ka ireny sorona tsy niova sy fanatitra isan-taona ireny dia tsy nahalavorariany izay olona nanatona velively akory. 2Raha tsy izany, tsy ho nitsahatra nanatitra va ny olona: satria rahefa voadio indray mandeha ny mpanatitra, dia tsy ho nahare intsony hoe nanota izy tamin'ny fieritreretany. 3Nefa isan-taona dia nahatsiaro ny fahotany ihany ny olona tamin'ireny sorona ireny, 4satria aiza izay ran-janak'omby sy ran'osilahy no hahafaka ny fahotana? 5Noho izany indrindra, nony niditra tamin'izao tontolo izao ny Kristy dia nanao hoe: Tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra, fa namboatra vatana ho ahy hianao; 6tsy sitrakao ny sorona dorana sy ny sorona noho ny ota, 7ka hoy aho hoe: Inty aho tonga - fa izaho no voalaza ao amin'ny horonam-boky - hanao ny sitra-ponao, Andriamanitra ô! 8Voalohany aloha lazainy hoe: Samy tsy nilainao sy tsy sitrakao na ny fanatitra na ny sorona dorana, na ny sorona noho ny ota, - dia zavatra natolotra araka ny Lalàna avokoa ireny; - 9manaraka izany tohiziny hoe: Inty aho tonga hanao ny sitra-ponao; ka manafoana ny voalohany izy amin'izany mba hanorenany ny faharoa, 10ary ny herin'izany sitra-po izany no nanamasinana antsika, tamin'ny nanoloran'i Jesoa-Kristy ny vatany indray mandeha monja.
11Ary ny mpisorona rehetra dia mijoro isan'andro hanao ny raharahany, sy manolotra matetika ireny sorona tsy nahafa-pahotana akory ireny; 12fa izy kosa indray mandeha monja no nanolotra sorona noho ny ota, dia mipetraka mandrakizay eo an-kavanan'Andriamanitra; 13ka hatramin'izao izy dia miandry ny hanaovana ny fahavalony ho fitoeran-tongony rahatrizay. 14Fanatitra iray monja dia ampy handavorariany mandrakizay izay nohamasininy. 15Ary asehon'ny Fanahy Masina amintsika koa izany; fa rahefa voalazany hoe: 16Fanekena toy izao no hataoko amin'ny finakavian'Israely rahefa afaka izany andro izany, dia hoy indray ny Tompo: Halatsako ao an-tsainy ny lalàko, ary hosoratako ao am-pony, 17ka havelako ny hadisoany, ary tsy hotsaroako ny fahotany; 18ka rahefa voavela ny fahotana, dia tsy ilaina intsony ny sorona noho ny ota.
19Koa amin'izany, ry rahalahy, noho ny ran'i Jesoa, izay nahafaka malalaka antsika hiditra amin'ny fitoerana masina, 20mihazo ny làlam-baovao sy velona nosantarany ho antsika mamaky ny efitra lamba, izany hoe ny nofony, 21sy noho isika manana Mpisorombe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, 22dia aoka isika hanatona amin'ny fo mahitsy sy amim-pinoana feno, ary amin'ny fo voafafy ho afaka amin'ny fieritreretana mipentina ota, sy amin'ny vatana voasasa tamin'ny rano madio. 23Aoka isika hitoetra tsy azo hozongozonina amin'ny fanarahana ny fanantenantsika, fa mahatoky ilay nanao ny fampanantenana. 24Ary aoka hifandinika isika mba hampandroso ny fitiavana sy ny asa soa. 25Aza manary ny fiangonantsika, toy ny fanaon'ny sasany; fa mifamporisiha tsara, indrindra izao hitanareo fa efa antomotra ny andro.
26Satria rahefa mahalala ny marina isika no minia manota indray, dia tsy misy sorona hafa noho ny ota intsony; 27fa dia fiandrasana mahatsiravina ny fitsarana sy hatezeran'ny afo handevona ny mpikomy no sisa. 28novonoina tsy nasiana famindram-po akory izay nandika ny Lalàn'i Moizy, notondroin'ny vavolombelona roa na telo/ 29mba toy inona kosa àry no hamafin'ny fampijaliana heverinareo ho tandrifin'izay nanitsakitsaka ny Zanak'Andriamanitra, sy nanao ho zavatra tsy masina ny ran'ny fanekena nanamasinana azy, ary nanevateva ny Fanahin'ny fahasoavana? 30Fa fantatsika ilay nilaza hoe: Ahy ny famaliana, izaho no hamaly. Ary koa: Ny Tompo hitsara ny vahoakany. 31Zavatra mahatsiravina re izany ho azon'ny tànan'Andriamanitra velona!
32Tsarovy ny andro fahiny, niaretanareo ady mafy tamim-pijaliana, nony efa nohazavaina hianareo; 33fa mbetika nalam-baràka sy nampahoriana hianareo sady naseho ho fizàhan'ny olona; mbetika kosa niaraka ory tamin'izay nampijalina toy izany. 34Fa sady nangoraka izay nifatotra hianareo no nanaiky an-kafaliana ny fandrobana ny fanananareo, satria fantatrareo fa manam-pananana tsara lavitra sy maharitra mandrakizay hianareo. 35Koa aza miala amin'ny fahasahianareo, fa misy valiny lehibe izany. 36Ilainareo tokoa ny faharetana, mba hahazoanareo izay nampanantenaina anareo, rahefa nanao ny sitra-pon'Andriamanitra hianareo. 37Raha afaka kelikely foana, dia ho tonga ilay ho avy, fa tsy hiatoato izy. 38Ary ny oloko marina ho velona amin'ny finoana, fa izay mihataka kosa tsy mba ankasitrahan'ny foko. 39Raha isika, dia tsy mba anisan'izay mihataka ho very isika, fa naman'ireo mino mba hamonjy fanahy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0076 seconds